အက်ရာအတွင်း ဖြည့်စာထည့်ထားသော ပတ္တမြားများ - SSEF
16 Feb အက်ရာအတွင်း ဖြည့်စာထည့်ထားသော ပတ္တမြားများ
ပုံ ၁။	။ အမျိုးမျိုးသော ဆီဖြည့်စာများ ! Chantaburi ရှိ အရောင်းဆိုင်တွင်ခင်းကျင်းပြသထားသော ဆီဖြည့်စာများ။ (ဓါတ်ပုံ M.S. Krezemnicki, SSEF)
ဤအကြောင်းအရာမှာ အမှန်တကယ်ပင်ရိုးရှင်းသော ကိစ္စဖြစ်ပေသည်။ အက်ကြောင်းများပါရှိသော မည်သည့် ကျောက်မျက်ရတနာအမျိုးအစားမဆို ၎င်းအက်ကြောင်းအရာများ လျော့ပါးစေရန်အတွက် ဖြည့်ဆီများကို အသုံးပြု၍ ဖာထေးပြုပြင်ကြသည်။ ပုံ(၁)တွင် Chantaburi ရှိ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိ ဖြည့်ဆီအမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြထားသည်။ အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောအချက်မှာ မြကျောက်မျက်ရတနာများ (Emeralds) ဖြည့်ဆီဖြင့်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကို နားလည်လက်ခံသဘောပေါက်ကြသော်လည်း အခြားသောတွင်းထွက်ကျောက်မျက်ရတနာများဖြစ်ကြသည့် ပတ္တမြား၊ နီလာစသည့်ကျောက်မျက်ရတနာများကို ဖြည့်ဆီစသောအရာများဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသည်ဟု ကုန်သည်များကို ရှင်းပြသည့်အခါ ၎င်းတို့များစွာအံ့အားသင့်အထိတ်တလန့်ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းကဲ့သို့သော ပြုပြင်မွမ်းမံမှု့များကို ရှေးယခင် သမိုင်း (Nassau 1994) ကတည်းကစတင်သိမြင်ခဲ့ကြသည့်အတွက် ဖြည့်ဆီဖြင့်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသည် ကျောက်မျက် ရတနာလောကတွင် လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု မဖြစ်သင့်ပေ။ မမျှော်လင့်သောအချက်မှာ ၎င်းဖြည့်ဆီဖြင့်ပြုပြင်မွမ်းမံထား သောကျောက်မျက်ရတနာများကို ရောင်းဝယ်ရာတွင် ယနေ့အချိန်အထိသင့်တင့်လျှော်ညီသောထုတ်ဖော်တင်ပြမှု့များ မရှိသေးပေ။
လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်ကတည်းက ကျွန်ုပ်တို့ SSEF တွင် အက်ကြောင်းအရာများအတွင်းသို့ ဆီဖြည့်စာ (သို့မဟုတ်) ဖြည့်စာဖြည့်ထားသော အခြားကျောက်မျက်ရတနာများကို (မြကျောက်မျက်များအပြင်) ထပ်ခါထပ်ခါစစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းကျောက်မျက်များမှာ-ပတ္တမြား (ruby)၊ နီလာ (sapphire)၊ အညံ့ကျောက်မျက်များ (spinel)၊ တိုမလင်းကျောက်မျက်များ (tourmaline)၊ ဉဒေါင်ကျောက်မျက်များ (Garnet)၊ အခြား ပက်ဇိုတိုက် (Pezzottaite) ကဲ့သို့သောရှားပါးကျောက်မျက်များပါဝင်သည်။
ပုံ ၂။	။ တွေ့ရလေ့ရှိသော ပတ္တမြားပုတီး၊ အက်ရာများတွင်အရောင်မဲ့ ဖြည့်ဆီဖြည့်ထားသည့် ပတ္တမြားပုတီး။ (ဓါတ်ပုံ H.A. Hänni, SSEF)
အတွေ့ရအများဆုံးမှာ ပတ္တမြားတွင် ဖြည့်ဆီပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် မီးဖုတ်ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိသော အက်ကြောင်းအရာများပါရှိသည့် မြန်မာ့ပတ္တမြားများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အက်ကြောင်းအရာများ၌ ဆီဖြည့်စာ (သို့မဟုတ်) ဖယောင်းဖြည့်စာများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပုံ ၂ တွင်ကြည့်ပါ။ အချို့သော ခရမ်းရောင် (သို့မဟုတ်) ပန်းရောင်သန်းသော ပတ္တမြားများ၏ အက်ကြောင်းအရာများတွင် လိမ္မော်ရောင်ဆီဖြည့်စာများ ပါဝင်တတ် ကြသည်။ ထိုသို့ဆီဖြည့်စာများ ထည့်သွင်းရခြင်းမှာ ပိုမိုလှပ၍ တောက်ပသောအနီရောင်အရည်ရှိသည့်ပတ္တမြား အရောင်ရရှိနိုင်ရန်အသုံးပြုကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ပုံ ၃။	။ ပတ္တမြား၏အက်ကြောင်းအရာများတွင် အဝါရောင်ဖြည့်ဆီဖြည့်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းပတ္တမြား၏ အရောင်မှာ သိသာထင်ရှားစွာပြောင်းလဲသွားသည်။ (ဓါတ်ပုံ M.S. Krezemnicki & V. Lanzafame, SSEF)
ပတ္တမြား နှင့် အခြားကျောက်မျက်ရတနာများ၏ အက်ကြောင်းအရာများအတွင်းရှိ ဖြည့်စာများကိုအမျိုးအစားခွဲခြား လေ့လာရာတွင် မြကျောက်မျက်တွင် အသုံးပြုလေ့လာသော နည်းလမ်းများကိုအခြေခံ၍ လေ့လာအသုံးပြုထားသည်။ FTIR, Raman microscopectrometry, UV luminescence နှင့် meticulous microscopic observations အစရှိ သောနည်းပညာများ ပေါင်းစပ်၍အသုံးပြုလေ့လာကြသည်။ အချို့သောအခြေအနေများ၌ အက်ကြောင်းအရာများကို ဆီဖြည့်စာဖြည့်သွင်းထားသည့် ကျောက်မျက်များကို အပူချောင်း (သို့မဟုတ်) အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးကြည့်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်အလင်းရောင်မီး စသည်တို့ဖြင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ၎င်းဖြည့်ဆီများပြန်လည် ထွက်လာတတ်ပါသည်။
ပုံ ၄။	။ ဖြည့်ဆီဖြည့်ထားသော အက်ကြောင်းအရာအတွင်းသို့ လေပူဖောင်းများဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် သေးငယ်သော သစ်ပင်ပုံစံရှိသည့်ပုံသဏ္ဌာန်အဖြစ်တွေ့မြင်ရပုံ။ (ဓါတ်ပုံ H.A. Hänni, SSEF)
ကျောက်မျက်ပြုပြင်မှု့ဆိုင်ရာ သမိုင်းကြောင်းစာပေလေ့လာချက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ (SSEF)၏ အတွေ့အကြုံများအရ ကျောက်မျက်ရတနာတို့၏ အက်ရာများအတွင်းသို့ အရောင်မဲ့ (သို့မဟုတ်) အရောင်ရှိသောဖြည့်ဆီအရာဝတ္ထု ထည့်ခြင်း အယူအဆသည် အတော်လေးပင်ကြာဟောင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး၊ ရှေးဟောင်းကျောက်မျက်ရတနာများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောက်မျက်များ၏ အက်ကြောင်းအရာများအတွင်းသို့ ဖြည့်ဆီ (သို့မဟုတ်) ဖယောင်းဖြည့်စာ ထည့်ခြင်းသည် ရှေးယခင်ပင်အသုံးပြုခဲ့သော ကျောက်မျက်ပြုပြင်မှု့နည်းလမ်းဖြစ်သော်ငြားလည်း ဤနည်းဖြင့်ပြုပြင် ထားသောကျောက်မျက်ရတနာများအတွက် ပြည့်စုံသောထုတ်ဖော်တင်ပြချက်များ ဖော်ပြရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ SSEF မှ ကျောက်မျက်အမျိုးမျိုး၏ အက်ကြောင်းများအတွင်း ထည့်သွင်းထားသော ဆီဖြည့်စာ (သို့မဟုတ်) ဖယောင်းဖြည့်စာများ၏ အမျိုးအစား၊ ပါဝင်မှု့ပမာဏကို စစ်ဆေးခွဲခြားပေးပြီး ၎င်းကျောက်မျက် အမျိုးမျိုးတို့၏ သန့်စင်မှု့ဆိုင်ရာ ပြုပြင်မွမ်းမံမှု့များကို ပြည့်စုံသည့်ထုတ်ဖော် တင်ပြချက်များ မှတ်တမ်းများထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်မှတ်တမ်းများကို ရိုးရှင်းသောအသုံးအနှုန်းများ၊ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းများကိုအသုံးပြု၍ ဖော်ပြ ရေးသားထားသည်။